Iindaba -Ifayibha yeGlasi yeMesh yeNtengiso yoHlahlelo lokuHlaziya kwamaZwe ngamaZwe aPhezulu ngeDatha, ukuThengiswa kweShishini, ukuThengiswa kweRhafu, ubungakanani beMarike ngoQikelelo lweNgingqi ukuya ku-2024 ngenqanaba lokukhula okumangalisayo
Uhlalutyo lokuHluma lweFayibha yeglasi yeFayibha ka-2021 ngamazwe aPhezulu ngeDatha, ukuThengiswa kweShishini, ukuThengiswa kweRhafu, ubungakanani beMarike ngoQikelelo lweNgingqi ukuya ku-2024 ngenqanaba lokukhula okumangalisayo
Inkcazo emfutshane malunga neMakethi yeFayibha yeGlasi yeFayibha: I-fiberglass mesh yinkqubo ephothiweyo, yecrisscross yentsinga ye-fiberglass esetyenziselwa ukwenza iimveliso ezintsha ezinje ngetheyiphu kunye neefilitha. Xa isetyenziswa njengecebo lokucoca ulwelo, akuqhelekanga ukuba umenzi afafaze isambatho sePVC ukuze somelele kwaye sihlale ixesha elide.
Ngomhla we-15 ku-Disemba ka-2020 (i-Expresswire) -Ingxelo ye-2021-2024 yeNgxelo yoPhando inikezela ngohlalutyo oluphambili kubume bemakethi ye-Fibre Glass Mesh abavelisi abanenyani kunye namanani, intsingiselo, inkcazo, uhlalutyo lwe-SWOT, izimvo zeengcali kunye uphuhliso lwamva nje kwihlabathi jikelele. Ingxelo ikwabala ubungakanani bemakethi, ukuThengiswa kweFayibha yeGlasi yeGlasi, amaxabiso, iRhafu, uMda oPheleleyo kunye nokwabelana ngeNtengiso, ulwakhiwo lweendleko kunye nenqanaba lokukhula. Ingxelo ithathela ingqalelo ingeniso eveliswe kwintengiso yale Ngxelo kunye neetekhnoloji ngokwamaqhekeza ezicelo kunye nokuKhangela kwiitafile zedatha yeNtengiso kunye namanani asasazwe kumaphepha ali-117 kunye nobunzulu be-TOC kwiFiber Glass Mesh Market.
I-COVID-19 inokuchaphazela uqoqosho lwehlabathi ngeendlela ezintathu eziphambili: ngokuchaphazela ngokuthe ngqo imveliso kunye nemfuno, ngokwenza unikezelo lonikezelo kunye nokuphazamiseka kwimarike, kunye nefuthe layo lezemali kumashishini nakwiimarike zemali.
Ingxelo yokugqibela iya kongeza uhlalutyo lwempembelelo ye-COVID-19 kolu shishino.
UKUQONDA INDLELA EGutyungelwa Ngayo I-COVID-19 KULE NGXELO-ISICELO SISAMPULI
Injongo yesifundo kukuchaza ubungakanani bemakethi yamacandelo ahlukeneyo kunye namazwe kwiminyaka edlulileyo kunye nokuqikelela amaxabiso kwiminyaka emihlanu ezayo. Ingxelo yenzelwe ukuba ibandakanye zombini izinto ezisemgangathweni ezifanelekileyo kunye nobungakanani beshishini ngokubhekisele kwingingqi nganye nakumazwe abandakanyekayo kolu phando. Ngapha koko, le ngxelo ikwanikezela ngolwazi oluneenkcukacha malunga nemiba ebalulekileyo enjengokuqhuba kunye nezinto ezithintelayo eziza kuchaza ukukhula kwexesha elizayo kwintengiso yeFiber Glass Mesh.
Ububanzi beNtengiso yeGlasi yeFayibha yeGlasi:
Ngo-2010, i-GlassFibreEurope ibityhola ukuba iinkampani zase-China i-Chongqing Polycomp International Corp., iJushi Group kunye ne-New Changhai Group zalahla ixabiso elikhulu, elinamaxabiso angafanelekanga e-fiberglass rovings, imitya ecoliweyo, imisonto kunye nemethi kwimarike yaseYurophu kule minyaka idlulileyo. Ngelo xesha, EU ukuqala anti-yokulahla uphando iglasi ifayibha enemingxuma ngelaphu evela China. Abathumeli kumazwe angaphandle beFibre Glass Mesh ezinje ngeYuyao Mingda Fiberglass Co Ltd, Grand Composite, Jiangsu Tianyu Fiber Co. Ltd babandakanyeka. Esi siganeko sijongane nesibetho esikhulu kumzi mveliso we-fiberglass wase China.
Kwiminyaka emihlanu kamva, Kwintsebenziswano esebenzayo China Glass Fibre Industry Association, China Composites Industry Association, Ningbo City Council, i Ningbo amashishini iglasi ifayibha wamema Jiangsu, Shandong nakwezinye iindawo 16 amashishini iglasi ezinkulu beza Ningbo, i-EU iglasi ifayibha igridi Ilaphu Ukuphononongwa kwetyala lokuchasana nokulahlwa kwetyala ukuze kufikelelwe kwisivumelwano.
Ngenxa yomda wokufikelela kumzi mveliso osezantsi, baninzi abavelisi eShandong, Hebei, Zhejiang, Jiangsu nakwezinye iindawo zase China ezinamandla amakhulu kunye nexabiso eliphantsi kakhulu. Bavelisa umgangatho ophantsi weglasi yefayibha enemigca, le nto iphazamisa ukukhula okunempilo kweshishini, emva kweminyaka embalwa edlulileyo yexesha elinzima, kwaye umzi mveliso e-China uza kuzisa imeko yokhuphiswano olunocwangco.
Imakethi yehlabathi yeFibre Glass Mesh kulindeleke ukuba ikhule kwi-CAGR eyi-3.4% kule minyaka mihlanu izayo, iya kuthi ifike kwizigidi ezingama-571.6 zeedola ngonyaka ka-2024, ukusuka kuma-482.6 ezigidi zeedola ngo-2019, ngokophando olutsha.
Le ngxelo igxile kwiFibre Glass Mesh kwintengiso yehlabathi, ngakumbi eMntla Melika, eYurophu naseAsia-Pacific, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAfrika. Le ngxelo ihlela intengiso esekwe kubavelisi, imimandla, uhlobo kunye nokusetyenziswa.
Fumana ikopi yesampulu yeNgxelo yeemarike zeFayibha yeGlasi yeGlasi 2020
Xela uqhubeke nezifundo malunga nenqanaba lophuhliso lweemarike kunye nexesha elizayo leFibre Glass Mesh Market kwihlabathi liphela. Kwakhona, yahlulahlulahlulahlula i-Fibre yeGlass Mesh yokwahlulahlulahlula uhlobo ngohlobo nangeZicelo ukwenza uphando olunzulu kwaye olunzulu kwaye ityhila iprofayili yentengiso kunye nethemba.
Ulwahlulo olukhulu zezi zilandelayo:
● Iglasi yeC-C
Izicelo eziphambili zezi zilandelayo:
● Ukufakwa ngaphandle kodonga
● Ukwakha ukungavali kwamanzi
Ngokwendawo, le ngxelo yahlulwe yangamacandelo aliqela aphambili, ngentengiso, ingeniso, isabelo sentengiso kunye nenqanaba lokukhula kweFiber Glass Mesh kule mimandla, ukusuka ngo-2014 ukuya ku-2024, egubungela
● EMntla Merika (eUnited States, eCanada naseMexico)
● IYurophu (iJamani, i-UK, iFransi, i-Itali, iRashiya neTurkey njl. Njl.)
● I-Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Thailand, Philippines, Malaysia kunye neVietnam)
● UMzantsi Melika (eBrazil, eArgentina, e-Columbia njl. Njl.)
● KuMbindi Mpuma naseAfrika (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria nase Mzantsi Afrika)
Le Fayibha yeGlasi yeMesh yeMarike yoPhando / yeNgxelo yoHlahlelo ineempendulo zale mibuzo ilandelayo